Apple Music Artists Iye Zvino Vanogona Kugovana Ivo "Zviitiko Zvikuru" NevaFans | Ndinobva mac
Apple Music artists ikozvino inogona kugovera yavo "milestones" nevateveri
Apple Music inoda kuenderera ichisarudzwa nevashandisi, zvirinani ndizvo zvainoedza kuita. Isu tinoziva kuti mukwikwidzi akasimba, Spotify, anoita kuti zvinhu zviome zvikuru asi Apple hairege uye ichiwedzera uye kakawanda ichivhura mabasa matsva ayo anoita kuti ive inopfuura imwe nzira inoshanda kune vakawanda vanofa. Iyo nyowani mashandiro ndeyekuti iwe unogona ikozvino share muimbi Zviitiko nenzira iri nyore.
Apple yakaburitsa chinhu chitsva chinoita kuti zvive nyore kune Apple Music maartist kugovana icho chainoti Milestones nevateveri. Zvinyorwa zvinogona kugoverwa zviri nyore pa Twitter, Facebook uye Instagram Nhau zvinoenderana nezvakasimbiswa iri peji idzva rakagadzirwa nemaune mune iyo Apple webhusaiti.
Goverana ako makuru nguva zvakananga kubva kuApple Music application. Nema tapisi mashoma, unogona kutaurira vateveri vako nezve nyowani nyowani nenziyo dzako, maShazams mangani iwe aunayo mune yakapihwa nyika kana dunhu, uye mamwe matanho akakosha awakasvika paApple Music. Mira kunze nemafeni ako akasarudzika mapepa zvichienderana nezviitiko zvakakwanisika. Ichave ichiwanikwa kuburikidza neemail kana mameseji.
Iwo mameseji ari pawebhusaiti anotungamirwa kune avo vanhu kana makambani ane basa rekugadzirisa maakaunzi evakakurumbira. Pane imwe nguva takasangana neichi chiziviso kubva kuApple: "Kana iwe uchikwanisa kugadzirisa masocial media maakaundi evazhinji maartist, ive shuwa kuona kuti wapinda muaccount chaiyo usati wagovana chero zviitiko zvakakosha." Izvi zvakakosha, kuti uone kana vachizogovana danho rinokosha remumwe muimbi paakaundi yeumwe. Izvo zvaizogadzira mhirizhonga kufunga kuti nguva zhinji ivo maartist ivo pachavo vachizvikudza nekugadzirisa maakaunzi avo pamambure ivo pachavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music artists ikozvino inogona kugovera yavo "milestones" nevateveri
Iwe unogona ikozvino kutenga cryptocurrencies kubva kune ako akajairwa Apple Kubhadhara makadhi nekuda kweCoinbase
Apple inosimudzira "zvega zvipo" zvevatengi veApple Card